Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lwemiqathango ye-ACT I-Admissions Data kwiiKholeji zase-Arizona
Nangona iArizona inemizuzu emitha engama-square, ayinayo iikholeji ezininzi kunye neeyunivesithi ezineminyaka emine. I-Arizona State kunye neYunivesithi yase-Arizona, nangona kunjalo, iinqununu zikarhulumente ezininzi zase-US Uza kufumana iinketho ezimbalwa zeekholeji ezincinci. Itheyibhile engezantsi inokukuxelela ukuba i-ACT yakho izikolo zijolise ekungeneni. Ukuba u-ACT izikolo zingena ngaphakathi okanye ngaphezulu kweendlela zengezantsi, ulungile kumkhondo.
UMthetho weeKholeji zaseArizona. Izikolo (phakathi kwe-50%)
IYunivesithi yase-Arizona 18 22 15 21 17 23
State of Arizona 22 28 22 28 23 28
College College Vula ukuVunywa
Ikholeji yasePrescott 21 28 20 28 19 24
Yunivesithi yaseArizona - - - - - -
Imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka kakhulu ukusuka kwiDine, iikholeji yaseMelika yaseMelika enezicelo ezivulekile, kwi-University of Aeronautical University yase Prescott apho abaninzi abafaki zicelo banamanani amanqaku angaphezu kwemilinganiso. Qaphela ukuba akukho iikholeji zaseArizona zikhethwe ngokugqithiseleyo. Amanqaku etafile apha ngasentla aphakathi kwama-50% abafundi ababhaliswe. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekujoliseni kwelinye leekholeji zase-Arizona. Ukuba amanqaku akho angaphantsi kwebala eboniswe kwitheyibhile, ungalahlekelwa yiphina ithemba - khumbula ukuba ama-25% abafundi ababhalisile banamanani amanqaku angaphantsi kwezo zidweliswe.
Kwakhona khumbula ukuba izikolo ze-ACT ziyingxenye enye yesicelo. Ezi iikholeji zase-Arizona zifuna kwakhona ukubona irekhodi eliqinileyo lemfundo , kwaye abanye baya kukhangela isincoko esiphumelelayo , imisebenzi yentshukumo echaphazelekayo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa . Kwezinye iimeko, abafundi abanamanani aphantsi (kodwa ngaphandle kwezinye izicelo ezinamandla) bangangeniswa, ngelixa abafundi abanezikolo eziphezulu (izicelo ezinobuthakathaka) zingavunyelwa.
Qaphela ukuba i-SAT kunye ne-ACT zithandwa kakhulu e-Arizona kunye nekhethelo elincinane kwi-SAT. Zomibini iimvavanyo zamkelwe kuzo zonke iikholeji ezibhalwe ngasentla. Ukuba ufuna ukujonga indlela umgangatho wakho we-ACT ulinganisa ngayo amanqaku e-SAT, sebenzisa le tafile yokuguqulwa kwe-SAT-ACT .
Ukutyelela iprofayili yesikolo ngasinye, nqakraza kwigama lesikolo kwiseshati elingentla. Kulapho, uya kufumana olunye ulwazi oluncedayo, njengemigangatho yamanani abandakanyekayo, idatha yenkxaso-mali, kunye neenkcukacha zobhaliso. Ezinye izikolo nazo zinegrafu ye-GPA-SAT-ACT ebonisa indlela abanye abafaki zicelo abaye bafezeka ngayo, kwaye zeziphi iimpawu zamabanga / iimvavanyo.
Iincwadi ezikhuthaziweyo zeBuddha zokuqala
Amasiko kunye neNkcubeko yamaLammas
I-MARTIN Igama lomnini igama kunye nemvelaphi
IiRek Resorts kunye neMpembelelo Yabo kwiNgqongileyo
I-Etymology yamazwi kunye neengxelo zabo ezimangalisayo
Abakwa-Brevard College Admissions